Ahoana ny fisafidianana manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka
Fitsipika 8 momba ny fandraisana manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka
Zoma Janoary 29, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Scott Hardigree
Amin'ny tapany voalohany (Mety mila manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka ianao raha…) nifanakalo hevitra momba ny hoe rahoviana ary nahoana no mety ho hevitra tsara ny fifanarahana amin'ireo manam-pahaizana izay manana traikefa amin'ny marketing amin'ny mailaka. Hodinihintsika izao ireo fitsipika fitarihana hodinihina alohan'ny hanakaramana an masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka, mpanolo-tsaina amin'ny marketing mailaka na mpitantana marketing mailaka ao an-trano. Fa maninona
Matetika ny orinasa matetika dia mifidy ny fepetra voafantina, izay miteraka alahelo, tsy fahombiazana ary vola very be sy dolara very.
Zavatra dimy tsy tokony hataonao
Aza ferana ny fikarohana nataonao ara-jeografika. Eny, ny fomba tena ilaina indrindra hananganana fifampatokisana dia ny fifandraisana mifanatrika, fa tsy midika izany fa ny fifampatokisana dia tsy azo aorina amin'ny morontsiraka na kaontinanta misaraka momba an'io raharaha io. Tadidio fa izay tadiavinao no mety. Ny famerana ny fikarohana ataonao hatrany am-boalohany ka hatramin'ny faritra jeografika voafaritra dia mametra tsy ilaina. Noho ny teti-bolan'ny varotrao sy ny ROI atahorana, avo lenta ihany ny tsatokazo. Amin'izao andron'ny mailaka sy WebEx izao dia mora sy eo noho eo ny fifandraisana. Raha ny marina, rehefa mihaona mivantana amin'ny mpanjifanay isika (na mila ad hoc na serivisy fitantanana feno) dia matetika mifantoka sy mahomby ny fivoriana satria efa nomaninay mialoha izy ireo ary voafetra ny fotoana.
Aza asiana fizahana arakaraka ny habeny ireo matihanina. Raha orinasa kely ianao dia tsy tokony handà ny fiaraha-miasa amin'ny gun-for-hire fotsiny satria manome tolotra bebe kokoa izy ireo ary manana traikefa betsaka noho izay ilainao; azo antoka, mety tsy ivon-toeram-bola be ho azy ireo ianao fa angamba manana ny fahaizana marina ilainao izy ireo.
Toy izany koa, ny mpanjifa lehibe kokoa dia tsy tokony hanilika ireo masoivoho madinidinika na ireo matihanina tsy miankina amin'ny fiheverana azy ireo. Ny olona manan-talenta amin'ny familiana fivarotana kely dia mety manana traikefa bebe kokoa noho ny matihanina amin'ny marketing amin'ny mailaka eo an-toerana na ireo mpiasa antonony izay homena anao ao amin'ny masoivoho misahana serivisy feno. Ny fifantohana, ny fahaizana ary ny hevitra no zava-dehibe.
Aza atao ny fananana traikefa amin'ny indostria. Ny pro marketing miaraka amin'ny traikefa an-tsokajy maro dia mety iharan'ny eritreritry ny vondrona indostrialy. Tsy misy vondrona na olona iray hahalala zavatra betsaka tahaka ny fantatrao momba ny indostriao, noho izany ianao dia tokony hanakarama azy ireo amin'ny zavatra fantany: ny kanto sy ny siansa amin'ny marketing amin'ny mailaka.
Ny iray amin'ireo zavatra tiako ho amin'ny marketing amin'ny mailaka dia ny fiheverana ny hevitra marobe azo avy amin'ny fiasana manerana ny indostria isan-karazany. Ny indostria rehetra dia miavaka, fa samy manana ny mampiavaka azy avokoa. Matetika ny zavatra ianarantsika manompo mpanjifa amin'ny indostria iray dia miteraka hevitra vaovao ho an'ny mpanjifa iray hafa.
Aza mangataka asa vinavina (na mampiala voly). Ny fampielezan-kevitra na fanandramana spekulative dia ny bikan'ny orinasan'ny maso ivoho, toy izany ihany koa ho an'ireo mifantoka amin'ny mailaka. Ny fampielezan-kevitra manokana dia toy ny steroid, matetika izy ireo no mampihoatra ny mpanolotra? fahaiza-manao. Fa ny antony lehibe indrindra tsy angatahana asa spec dia ny prospect tsara indrindra – ilay tena tadiavinao – tsy hahavita azy. Tsy mila izany izy ireo. Arakaraka ny ananan'izy ireo mitsambikina amin'ny tadin-dokambarotra ho anao no tokony hampiahiahy anao. Raha vonona ny hanome ny asany izy ireo dia tsy tokony hisy tsena tena tsara amin'izany.
Aza sorohina ny fanontaniana momba ny teti-bolanao. Aza avela hisy hilaza aminao fa tsy mampiresaka ny vola (na ny teti-bola). Ny masoivoho tsirairay na ny outsourcer dia manana farafahakeliny farafahakeliny momba ny teti-bolan'ny mpanjifa, tonga tamin'ny alalàn'ny traikefa ary niorina tamin'ny ampahany tamin'ny toekarena sy ny entan'ny mpanjifany ankehitriny. Izany no antony maha-zava-dehibe, mba hanaovana fitsinjaram-pahalalana, ny fanananao hevitra momba ny teti-bola na tokony hisy. Angamba ianao efa niaina traikefa nahafinaritra tamin'ny fanambaranao mialoha ny teti-bolanao na izay noheverinao ho miharihary (tadidio ny tranonkala voalohany novolavolanao?) Tonga izany. Fa amin'ny fitsipika ankapobeny, rehefa miresaka amin'ireo zavatra andrasana dia liana amin'ny fifanakalozan-kevitra misokatra raha ny teti-bolanao no resahina. Amin'ny farany dia hamonjy fotoana sy hery ary vola ianao.
Ka ahoana no tokony hisafidanao ny mpiara-miasa amin'ny mailaka?
Fantaro izay ilainao. Ny zavatra ratsy indrindra azonao atao dia ny manakarama asa ary avelao izy ireo hanao izany. Mila olona hitarika na hanaraka olona ve ianao? Orinasa afaka mamolavola paikady na manam-pahaizana amin'ny fanatanterahana? Mpanolo-tsaina tia miala voly sa iray ihany ny orinasa? Mpiasa mandray baiko sa olona hanohitra ny fisainanao?
Manomboha resaka. Alefaso imailaka ny prospect, na antsoy izy ireo. Miaraha mandany minitra vitsy amin'ny telefaona dia hahita fahatsapana simia sy fahalianana eo noho eo ianao. Anontanio azy ireo ny tantarany, iza ny mpanjifany ankehitriny, inona avy ireo fahaiza-manao fototra.
Asao izy ireo handinika fanadihadiana vitsivitsy. Ataovy ao an-tsaina fa tsy mitady ny hahitana raha misy vokatra tsara hitaterany (izy rehetra dia hanao izany) fa ny hahafantatra ny fisainana ao ambadiky ny fomba nahatongavan'izy ireo tamin'ny vahaolana. Hianaranao ny fizotr'izy ireo, inona izany, ny fomba fiasan'izy io, ary ny fomba mety hifanaraka amin'ny orinasanao sy ny kolontsainanao. Misy fomba ve? Mifototra amin'ny aingam-panahy? Voatarika data?
Rehefa mahita mety tsara ianao dia mifanakaloza hevitra amin'izy ireo ny fomba tsara indrindra hiantohana ny fifandraisana lava sy mahomby. Tongava mazava ny fifanarahana momba ny antenainao hahazo onitra sy serivisy. Avy eo dia esory ny basin'ny starter ary avelao izy ireo hiasa.
Tags: fananganana ekipaWordPress